Warbixin: Yaa hanan doono hoggaanka dalka ee maanta la isku hayo? – Kismaayo24 News Agency
Warbixin: Yaa hanan doono hoggaanka dalka ee maanta la isku hayo?
by Tifaftiraha K24 8th February 2017 047
Waxaa maanta magaalada Muqdisho ka dhacaysa doorashada madaxweynaha oo dhowr jeer dib loo dhigay. Doorashadan ayaa waxay lagu qabanayaa xeradii hore ee ciidanka cirka ee Afisoone oo ammaankeeda aad loo adkeeyay.
Kuwa ku lugta leh codeynta waxay qabaan kalsooni, iyagoo ku macneeyey talaabo muhiim ah oo horey loo qaaday waddan in muddo ah deganaansho la’aan ahaa kaas oo ku jira liiska madaxweyne Donald Trump ee xayiraadda safarka todobo waddan oo dadkoodu u badan yihiin Muslimiin.
“Dhamaanteen si wanaagsan ayaan ugu diyaarsannahay doorashada madaxweynaha cusub, waa tijaabo dimuqraadiyad curdan ah” sidaa waxaa yiri Axmed Cali oo ah xildhibaan.
Baasaboor Ajnebi ah
Dhowr hooobiyayaal ayaa laga maqlay qeybo ka mid ah caasimadda xalay.
Madaxweynaha waxaa dooran doona 275 xildhibaan oo uu ka kooban yahay golaha sharci dajinta iyo 54 xubnood ee aqalka sare.
In badan oo ka mid ah 22 musharrixiinta madaxweyne waxay haystaan baasabooro shisheeye. Waxayna intooda dban ku nool yihiin waqooyiga Ameerika iyo Yurub.
Madaxweynaha xilka haya Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu raadinayaa in dib loo doorto, laakiin musharaxiinta ka soo horjeeda oo uu ku jira ra’isalwasaaraha Cumar cabdirashiid ayaa ku eedeeyey wadamadda dariska ah inay faragalin ku hayaan hannaanka doorashadda iyagoo garab siinaya musharaxiin gaar ah.
“Wadamadda dariska ah waa inay dhawraan madaxbannaanideenna aynna joojiyaan faraha ay kula jitaan arrimaheenna” ayuu yiri Ra’isalwasaaruhu isagoon magacaabin dalalkaas.
Wadammo Muslimiin ayaa baadigoobaya saaxiibtinimo dolwadda Soomaaliya waxaa ka mid ah Turkiga oo maalgaliyey wadanka, Imaaraadka Carabta & Qadar ayaa taageeraya musharaxiin kala duwan.
Image captionCaruurta caasimadda oo garoon lagu ciyaaro ka dhigtay wadooyinkii mashquulka badnaan jiray
Inkastoo Matt Bryden, agaasimaha hay’adda cilmibaarista ee Sahan ahna qabiir siyaasadda Soomaaliya annu rumaysnayn in hannaanka doorashadu uu noqon karo xor iyo xalaal, haddana wuxuu sheegay in uu yahay mid ka fiican arrimo kale.
“Way jiraan warar lagu kalsoon karo, waxaa qabaa in si fiican loo taaban karo eedeymaha musuqmaasuq, cagajugleyn, xadgudub. Laakiin aasaasiyan weli waa talaabo hor-u-socod ah” ayuu yiri Bryden
Waxaa kale oo uu yiri “Jid kale wuxuu ahaan lahaa inaan la helin isbadal guud ahaan, xalaadaas oo Soomaaliya dib ugu celin lahayd burbur, sidaad darteed ma ahan wax qurxoon, Laakiin tan [Doorashada] talaabo loo qaaday jihada saxda ah waana laga yaabaa inay tahay sida ugu fiican ee aan rajeynaynno heerkan”.
Kuwa badan oo Soomaaliya ku sugan ayaa filayaa tartan aad loogu loolamo kaas oo la filan karo wareegyo dhawr ah oo u dhaxeeya labada musharax ee ugu codadka badan.
Boorar midabyo badan leh oo ka muuqda caasimaddan xeebta dhacda ayaa bixinaya dareenka ah in doorashada madaxweynaha Soomaaliya ee Arbacada dhacaysa mid la mid ah kuwa kale, taasi waa mid xaqiiqda ka fog.
Muqdisho ayaa kala xiran, sababta rabshadaha ay sameynayaan kooxda Islaamiyiinta ee Al-Shabaab. Garoonka diyaaradaha ayaa xirnnaan doona, codbixinta loo gaaryeelay iyadoo aad loo ilaalinayo amniga xaruntii hore ee ciidamadda cirka, cabsi laga qabo weerraradda ayaa goor horeba dib u dhigay codbixinta tiro ka dhawr jeer.
Laakiin qaar kormeerayaasha ah waxay ka walwalsan yihiin sida ay u noqon karto mid lagu kalsoonnaan karo.
Heerka kala iibsiga codadka, musuqmaasuqa iyo caga-jugleynta waa walaaca haysta wadan hay’adda caalamiga ah ee hufnaanta ay ku qiimaysay kan ugu musuqa badan aduunka.
Image captionMadaxweynaha waxaa dooranyo xubnaha Aqalka Sare iyo Golaha Shacabka
Mar horeba Hanti-dhawrka guud ee Qaranka Nuur Jimcaale Faarax wuxuu sheegay in labada aqal ee Baaralamanka ee dooran doonna Madaxweynaha, midkiiba ay ku baxday 1.3 milyan oo doolar.
Beesha caalamka sidoo kale waxay muujisay walaac wayn oo ay ka qabto doorashada, Xafiiska hawgalka caawinta Soomaaliya ee Qaramada Miodoobay ayaa xusay tiro ka mid ah xaaladaha foosha xun ee qorshaha doorashada oo ay ka mid tahay in kuraas loo qoondeeyey musharraxiin haween kaliya ah ay ugu dambeyntii qaateen musharaxiin rag ah.
Rabshado, cagojugleyn iyo laaluush ayaa harreeyey qorshaha sida uu sheegay hawlgalka Qaramada Midoobay oo sidoo kale cambaareeyey go’aanka ah in musharaxiinta la eedeeyey aan lagala noqon xubinnimadda.
TOOS U DAAWO: Doorashada Madaxweynaha oo goordhaw ka bilaabatay xarunta Afisyooni iyo musharixiinta oo….
DEG DEG: Codeynta wareega koowaad oo soo dhamaatay iyo tirinta codadka oo bilaabatay
SAWIRRO: Imaaraadka Carabta oo Kacdoon lagu Aflagaadeynaayo M.Farmaajo ka Bilaabay Baraha Bulshada
admin 9th March 2018
Kenya oo duqeyn ay dad shacab ah ku dhamaadeen oo Kenya Gedo ka geysatey maanta.
Madaxweyne Xaaf oo kuguuleystay Taageerada Bulshaweynta.